Lingakanani ixesha olichithayo phakathi kokuzilolonga
ezaposwa ngomhla 03.10.2021 03.10.2021
Uninzi lwabaqalayo (kwaye banamava) abakhi bomzimba bakholelwa ukuba luluqeqesho olunzima olukhuthaza ukukhula kwemisipha okusebenzayo. Ngapha koko, oku akuyonyani ngokupheleleyo. Ukuzilolonga kuqinisa kuphela ukukhula, ngelixa ukwakhiwa kwezihlunu kwenzeka ngexesha lokuphumla.
Ngenxa yokuba iimbaleki ezininzi zingayazi le nyaniso ilula kunye nokuzilolongela ukunxiba, aziphumeleli kwiziphumo ezilindelekileyo. Yiyo loo nto ukuphumla kubaluleke kangaka.
Phakathi kokuzilolonga, ungabhukisha itikiti lenqwelomoya, uye kwimiboniso bhanyabhanya okanye uhambe uhambo ngendlela, okokuqala, uphumle, kwaye okwesibini, ukunika izihlunu ithuba lokuphuhlisa.
Ukufezekisa ukusebenza ngokukuko, kufuneka ulandele irejimeni efanelekileyo yomthambo kunye nokuphumla. Ke ngoko, kubalulekile ukwazi ukuba lingakanani ixesha lokuphumla ngexesha lekhefu phakathi kokuzilolonga amandla. Kule nqaku, siza kukuxelela ngokubanzi malunga noku.
Kutheni le nto izihlunu zifuna ukuphumla
Uninzi lwabakhi bomzimba bayayazi imeko xa, emva kokuzilolonga kakhulu ngoMvulo, ngoLwesithathu akusekho mandla maninzi kunye namandla omthambo. Musa ukucinga ngale meko yokudinwa okuqhelekileyo.
Inyani yile yokuba, ukuze wenze nawuphi na umsebenzi, umntu ufuna imeko ethile yezixhobo zebhayoloji. Ngexesha loqeqesho olusebenzayo, abakhi bomzimba bayazisebenzisa. Ngamanye amaxesha umzimba uphulukana namandla awo okuzala ngokupheleleyo.
Into yokuqala eyenzekayo emzimbeni emva koqeqesho lwamandla kukuqokelelana uvimba wezinto eziphilayo... Le nkqubo ayithathi imizuzu eli-15.
Ukuchacha okupheleleyo komzimba kungathatha ukusuka kwiintsuku ezintathu kuye kwiveki yonke (kuxhomekeke kubungakanani boqeqesho), kwaye kuphela emva kokuzaliswa kwezixhobo ze-biochemical apho inkqubo yokukhula kwezihlunu iqala khona.
Kuthatha ixesha elingakanani ukuphumla?
Ukulawula ukuqhelana nokuzilolonga kwakho akunzima kangako, kwaye ayinamsebenzi nokuba leliphi na icandelo lezihlunu zomzimba oziqeqeshayo: isifuba; umva; iinyawo, njl.
Khawufane ucinge ngemeko yokuba emva kokuzilolonga okunzima kwaye kube yimpumelelo ngoMvulo, ngoLwesithathu uzama nzima ukwenza into efanayo. Oku kuthathwa njengempazamo enkulu. Ukongeza kwinto yokuba ngale ndlela iziphumo zingenakufezekiswa, ubeka emngciphekweni wokonakalisa impilo yakho.
Kuyenzeka ukuba ngoLwesine uphinde ubuyise ngokupheleleyo amandla akho. Ukususela kusasa uya kuziva uhlaziyekile. Sikucebisa ukuba weqe namhla.
Okwangoku, kusenokufuneka ufumane ukuba amatikiti endiza athengiswa phi ukuze uhambe ngokukhuselekileyo kwimisebenzi yakho yemihla ngemihla. NgoLwesine, inkqubo yokubuyisa umzimba sele igqibile. Ngapha koko, umzimba womntu unako ngaphezulu.
NgoLwesihlanu, uya kuziva amandla amakhulu ngokungaqhelekanga kwaye uya kuba nakho ukwenza imithambo enzima ngakumbi kunangaphambili.
Ungalwenza njani usana olufanelekileyo ekhaya-inkqubo yoqeqesho
Konke malunga nokuqubha ukunciphisa umzimba
Uqeqesho lomntu kwindawo yokuzivocavoca: inkcazo, inkqubo kunye neengcebiso
Inkqubo yokuzivocavoca ekhaya eDumbbell
exhonyiweyo le midlalo
Edlulileyo Kufuneka wenze ntoni nge-offal
Okulandelayo Uyikhawulezisa njani imetabolism yakho?
Imibuzo ye-81 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,806.